DAAWO VIDEO:Dagaalkii Ugu danbeeyey Puntland Gobolka Sanaag Kula Wareegayso. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Dagaalkii Ugu danbeeyey Puntland Gobolka Sanaag Kula Wareegayso.
Xubnaha u shaqeeya SNMta ee ku sugan magaalada Badhan ayaa waxaa la siiyey digniin ah in ay ka soo waantoobaan u shaqeeynta SNMta, balse waxaa dhacday qaar ka mid ah shaqsiyaadkaas oo diiday ineey faraha kalla baxaan maamulka Hargeeysa ayaa maanta shaqsi ugu magacawnaa ku xiggeenka degmada Badhan SNMta ayaa ciidanka Puntland ay maanta xabsiga u taxaabeeyn.
waxaana lagu daba joogaa soo qabashadiisa ninkii ugu magacwnaa guddoomiyaha degmada Badhan SNMta. Waxaa muhiim ah in laga sifeeyo SNMta magaalooyinka ay ka joogaan goblka Sanaag oo dhan.
Halkani Riix Video Hoos
Somalia, Madaxdda Dawladda nooc kastooy yihiin ISLAAMEY (islaamow) Waxay leeyihiin xilli kooban oo madaxtinimo BALSE Salaadiinta iyo Nabadoonadu awoodoodu waxay jiraysaa ilaa ay xayyiga yihiin ISLAAMEEY Sidaa daraadeed beelaha madaxdooda rasmiga waa Salaadiinta iyo Nabadoonada Marka waa inay Beelahooda ka hor istaagaan SIYAASIINTA ku shaqaysana oo xukun doonka ah. WBT
wixi uso shaqeeyey somaliland jilibku doono ha ka noqdo warsangeli waa in Madaxa laga toogta ileyn naf badan ma lahe.
Anigu waxaan leeyahay xita xabsi in la dhigo ma aha waa in tiirka la soo taagaa si kuwa kale ay caqli ugu yeeshaan in aysan noqon SHISHEEYE KALKAAL.
why xabsi loo dhigaya oo raashin iyo kharash loo gelinaya War isdhaafiya qashinka !